Skin care တိုင်း ဝက်ခြံကင်းသလား……. – Dohphit
Skin care တိုင်း ဝက်ခြံကင်းသလား…….
May 27, 2020 dohphit.com THAWNGPANG, THEIHTLEI 0
အသားအရေကို ပုံမှန်လည်း Skin care ပါရဲ့။ ဝက်ခြံတွေက ပျောက်သွားလိုက် ပြန်ပေါ်လာလိုက်ပဲ ဆိုတဲ့သူလေးတွေရှိလား……. ဒီတစ်ခေါက်တော့ Skincare ရဲ့သားနဲ့ ဝက်ခြံ ဘာလို့ မပျောက်တာလဲ ဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အဖြေထုတ် ကြည့်ရအောင်။
Skin care တိုင်း ဝက်ခြံ ကင်းသလား………
အသားအရေကို ပုံမှန် ထိန်းသိမ်းမှု လုပ်ပေမယ့် ဝက်ခြံ ကင်းသွားဖို့ကတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဝက်ခြံပိုးဝင်တာ၊ ဝက်ခြံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အမာရွတ်တွေကိုတော့ သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ဝက်ခြံ ထပ်မဖြစ်လာအောင်လည်း ထိုက်သင့်သလောက် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုပြောရတာက ဝက်ခြံက လုံးဝ အမြစ်ပြတ် ပျောက်ဖို့ မလွယ်ကူတဲ့ အရေပြား ပြဿနာ ဖြစ်နေတာရယ် ဝက်ခြံတစ်လုံး ပျောက်ဖို့က အချိန်အတော်လေးပေးရတာရယ်ကြောင့်ပါ။ ဒါတင်လားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပြန်ပါဘူး။ ဝက်ခြံကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကလည်း များပါတယ်။
အချို့သော အကြောင်းအရင်းတွေက ရှောင်လွှဲလို့ ရပေမယ့် အချို့သော အကြောင်းအရင်းတွေက ရှောင်လွှဲဖို့ ခက်ပါမယ်။ ဥပမာ လေဒီလေးတွေမှာ လစဉ် ပြဿနာကြောင့် ဟော်မုန်း အပြောင်းအလဲ ဖြစ်တာမျိုးပေါ့။
ဝက်ခြံဖြစ်စေနိုင်တဲ့ တစ်ခုမကသော အကြောင်းအရင်းများ
ဝက်ခြံဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေက တော်တော်လေး များပါတယ်။ ဒီတစ်ခုမကတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေထဲမှာ သတိမပြုမိဘဲ လုပ်မိနေတဲ့ နေ့စဉ် အပြုအမူတွေတောင် ပါနေနိုင်ပါတယ်။
မျက်နှာကို ပုံမှန် မသန့်စင်ဖြစ်တာ
မိတ်ကပ်တွေ သေချာ မဖျက်တာတွေကြောင့် ဝက်ခြံတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Skin care တာက ဝက်ခြံ မသက်သာပေမယ့်
Skin care သာလုပ်နေရတယ် ဝက်ခြံကလည်း သက်သာမလာဘူး။ ဒါဆိုဘာလို့များ skin care နေရဦးမှာလဲဆိုတဲ့သူတွေကို ဆက်ပြီး အသားအရေ ထိန်းသိမ်းပါလို့ ပြောပါရစေ။ Skin care တာက ဝက်ခြံ မသက်သာပေမယ့်
အသားအရေပေါ်က ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားတာက သွေးလည်ပတ်မှု ကောင်းစေပြီး ချွေးပေါက်တွေ ပွင့်စေလို့ အရေပြားပေါ်မှာ လိမ်းလိုက်တဲ့ အသားအရေအတွက် အာဟာရဓာတ်တွေကို ကောင်းကောင်း စုပ်ယူနိုင်စေဖို့ အသားအရေ ကျန်းမာမှာပါ။
မျက်နှာကို Sheet Mask ကပ်တာ။ သဘာဝ အသားအရေထိန်းသိမ်းတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေ သုံးပြီး ပေါင်းတင်နှိပ်နယ်တာက အသားအရေကိုတင် ကျန်းမာစေတ မဟုတ်ဘဲ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေပြီး စိတ်ဖိစီးမှုကို ပြေလျော့စေလို့ စိတ်ခံစားမှုကို ကောင်းစေပါတယ်။
ချွေးပေါက်တွေထဲက အညစ်အကြေးတွေကို အသေအချာ သန့်စင်ဖယ်ရှားမိနိုင်တာကြောင့် ကြည်လင်တဲ့ အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ။
အသာအးရေကို ပုံမှန် သန့်စင်မယ်၊ အာဟာရဖြည့်မယ်၊ နှိပ်နယ်မယ်ဆိုရင် သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေပြီး ဆဲလ်အသစ်တွေ ဖြစ်စေသလို ကော်လာဂျင် ထွက်ရှိမှု မြှင့်တင်ပေးနိုင်တာကြောင့် အရွယ်တင် နုပျိုနေစေမှာပါ။ အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းရင့်ရော်တာကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်မှာပါ။
ဝက်ခြံ နဲ့ ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေကို သက်သာစေနိုင်တယ်
အသားအရေကို ပုံမှန် ထိန်းသိမ်းတာက အရေပြားပေါ်က ဝက်ခြံဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်တာကြောင့် ဝက်ခြံ သိပ်မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးသလို ဝက်ခြံကြောင့် ကျန်ခဲ့တဲ့ အမာရွတ်တွေကိုလည်း သက်သာစေမှာပါ။
ချွေးပေါက်ထဲက အညစ်အကြေးတွေ၊ အဆီတွေနဲ့ ဆဲလ်သေတွေကို အထိရောက်ဆုံး ဖယ်ရှားနိုင်မှုက ချွေးပေါက်ပိတ်ဆို့ပြီး ဆားဝက်ခြံတွေ ဖြစ်မလာအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သန့်စင်တဲ့ ချွေးပေါက်တွေက အသားအရေကို ကျန်းမာစေမှာပါ။
အသားအရေ ကောင်းမွန်ခြင်းက လူတစ်ယောက်ကို ယုံကြည်မှုတိုးစေနိုင်တဲ့ အချက် တစ်ခုပါ။ ဒါ​ကြောင့် အသားအရေကို ပုံမှန်လေး ထိန်းသိမ်းပေးတာက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု မြှင့်တင်ရာလည်း ရောက်ပါတယ်။
Skin care တာက ဝက်ခြံ မပျောက်ဘူးဆိုသော်ငြားလည်း အခုပြောခဲ့သလို အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေ ရနိုင်သလို မလိုအပ်ဘဲ ဝက်ခြံတွေ မထွက်အောင်လည်း အထိရောက်ဆုံး ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာပါ။
Virus le bacteria aa dannak